विप्लवको आक्रमक शैली : सम्झौता वा संघर्षको लागि ? « रिपोर्टर्स नेपाल
विप्लवको आक्रमक शैली : सम्झौता वा संघर्षको लागि ?
प्रकाशित मिति : 2018 February 20, 1:51 pm
काठमाडौं, ८ फागुन : नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीले आव्हान गरेको बन्द निकै आक्रमक देखिएको छ । बन्दका क्रममा डिउटीमा निस्किएको प्रहरी टोलीमाथि ढुंगामुडा भएका खबरहरु समेत बाहिर आएका छन् ।
एमाले–माओवादी केन्द्रबीच एकताको लागि सम्झौता भएको भोलिपल्टै आज विप्लवले देशभरि बन्द हड्ताल गरेका छन् । उनको बन्द संयोग हो कि के हो ? त्यो अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
उनको बन्द सम्झौताको लागि हो कि साँच्चिकै संघर्षमा जानको लागि हो ? त्यो पनि अहिले सोचनीय कुरा छ । विप्लवसँगै मोहन बैद्य र अन्य साना माओवादी पार्टीका नेताहरुवीच सशस्त्र संघर्षमा जानेबारे वार्ता चलिरहेको सूत्रहरुले बताउँदै आएका छन् ।
आजको बन्दमा विप्लव किन आक्रमक भए ? यो प्रश्न अहिले सबैको मनमा खड्किएको छ । विप्लव नेतृत्वको माओवादीद्वारा प्रहरीमाथि ढुंगामुडा गर्दा उनका २१ कार्यकर्ता प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् ।
बन्दको पिकेट डिउटी परिचालन गर्न निस्किएको सशस्त्र प्रहरीको बा १ ग १८१३ नं.को ट्रकलाई आरती स्टिल अगाडि कोशी राजमार्गमा विप्लव माओवादीका कार्यकर्ताले ढुङ्गा प्रहार गरी अगाडिको सिसा फुटाई दिएका छन्।
उक्त घटनामा संलग्न २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रामेछाप खाडादेवी(१ बस्ने मजदुर महासंको कोशी ब्युरो संयोजक ३० वर्षीय हरिचन्द्र खड्का र मोरङ बुढिगंगा(२ बस्ने बुढिगंगा सेक्रेटरी ६१ वर्षीय सुरेश राई रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यस्तै रूपन्देहीको कञ्चन गाँउपालिका(५ पिपरिचापास्थित भित्री सडकमा एउटा रोकिराखेको बसमा माओवादी कार्यकर्ताले ढुंगा प्रहार गरेका छन्।